Baqattoonni Sudaan Kibbaa Ugaandaatti Yaa’uu Itti Fufan
Hagayya 17, 2017
Baqattoota Sudaan Kibbaa
Lakkoobsi baqattoota Sudaan kibbaa Ugaandaa seenan miliyoona tokko ga’ee ennaa jiru kanatti maatiiwwan imalli dadhabsiise torban kana Ugaandaa seenuu itti fufaniiru.
Uummati ennaa daangaa qaxxaamuru gareeleen ripxe loltootaa hidhannoo qaban itti dhiyeenyaan hordofaa jiran.
Baqattoonni haaraa gamas seenan bakka nageenyaaf amansiisaa ta’e barbaaduuf jecha rooba yandoo, qorra kotteessaa halkanii fi aduu akkaan gubu keessa darbu. Lacey Lya fi maatiin isee Ugaandaa erga seenanii booda boqonnaaf gad taa’an.
Distii waa itti bilcheeffanno, saanii itti nyaannu, kubayaa itti bishaan itti dhugnu hanga tokko qofaa qabannee torbanneen sadiif muka jala bulaa turre. Biyya kessatti waan ta’aa jiru dhiifnee bakka nagaan jiraannu barbaaduuf deemna jette.
Wal waraansi Sudaan kibbaa baatii Muddee bara 2013 jalqabame. Jaarmoliin gargaarsaa garuu walii galteen aangoo qooddannaa milkaa’uu waan dhabeef jecha Adoolessa waggaa darbee qabee hookkarri hammaatee jira. Siivilonnis dhiibbaa walitti bu’iinsa kanaan miidhaan irra ga’e.
Koreen fannoo diimaa akka jedhutti lammiiwwan Sudaan Kibbaa miliyoona kudha lama keessaa sadii keessaa tokko qe’ee ofii irraa godaaneera. Nama lama keessaa tokko immoo akkaan beela’anii gargaarsa midhaan nyaataa eeggatu.
Lakkoobsi baqattoota Ugaandaa seenanii miliyoona tokko ga’uun hawaasa addunyaa kan dammaqsu ta’uu qaba, hookkaraa fi dararaa siivilota Sudaan Kibbaa irratti raawwatamu dhaabsisuuf illee tarkaanfiin fudhatamuu qaba jechuu dhaan Amnesty Internaatinaal waamicha dabarsee jira.
Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti erga baatii Adoolessa bara 2016 qabee Ugaandaan guyyaatti baqattoota Sudaan Kibbaa 1800 simataa jirti. Kanneen keessaa dhibba irraa harki 85 dubartootaa fi ijoolle dha.
UNHCR damee Ugandaaf dubbi himaa kan ta’an Charlie Yaxley akka jedhanitti kan umuriin waggaa 18 dubree maqaan ishee Tabu Sunday jedhamtu baqattoota Sudaan Kibbaa gamana seenan keessaa tokko.